सुशान्तको देहत्याग नभई ह’त्या गरिएको आशंका, काकाले पनि खोले मुख ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/सुशान्तको देहत्याग नभई ह’त्या गरिएको आशंका, काकाले पनि खोले मुख !
सुशान्तको देहत्याग नभई ह’त्या गरिएको आशंका, काकाले पनि खोले मुख !
सुशान्त सिंह राजपुतको काकाले सुशान्तले आ त्माह त्या गर्न नसक्ने बताएका छन् । भारतीय संचारमाध्यम इन्डिया टिभीका अनुशार उनले यो खबर झुट रहेको बताएका हुन् । “सुशान्त सु साइडको बिरुद्धमा बोल्ने मान्छे हो, उस्ले यस्तो काम गर्न नै सक्दैन पुलिसले यो केशलाई गम्भीरता पुर्वक लिएर छानबिन गरोस ।” यो खबर सुनेपछि उनको बुवा बेहोस अवस्थामा छन् भने ४ जना दिदीहरुले उनको लासलाई हेरेर रुदै बसेका छन् ।
प्रहरीले कुनै नोट नभेटेको बताएको छ । उनका साथीहरुले ढोका ढ्कढ्काउँदा नखोलेपछि ढोका फु’टाएर हेरेको बताइएको छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले पोष्ट गरेका स्टाटस र सामग्रीले उनी कुनै मा नसिक त’नावमा थिए भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
उनी एक्लोपनको सि’कार पनि भएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा निकै भावुक स्टाटस लेखेको देख्न सकिन्छ । उनले आफ्नो जिवनको अन्तिम पलमा लेखेको एउटा कविताले उनमा निरासा थियो भन्न सकिन्छ । उनले यस्तो लेखेका थिए ।
सुशान्तकी आमाको सन् २००२ मा निधन भएको हो। उनले १६ वर्षको उमेरमा नै आमा गुमाएका थिए । आफ्नो प्रेम जिवनमा पनि असफ भएका उनी ए’क्लोपन महशुष गर्दै थिए भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनले लगातार आफ्नाी आमाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै स्टाटस लेखिरहेका थिए । यस अघि पनि उनले यस्तै भाव’नात्मक कविता लेखेर आमालाई सम्झिएका थिए । ‘तिमी छँदा म पनि थिएँ, अब त म स्वयं पनि सम्झनामा मात्र छु, छायाँजस्तै‘ उनको यो कवितामा निकै ग’हिरो अर्थ लुकेको छ । अहिले उनी छाँया बनिसकेका छन् ।
सुशान्तसिंह रातपुतले सन् २००८ मा ‘किस देश मे हैं मेरा दिल’ टेलिभिजन कार्यक्रमबाट अभिनय कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए। यस कार्यक्रमबाट भने उसलाई खासै पहिचान भएन। त्योसँगै टेलिभिजन कार्यक्रमहरु ‘जरा नचके देखा ले’ र ‘झलक दिखला जा’ मा पनि देखिएका थिए।nसन् २००९ मा उनी पवित्रा रिश्ता टेलिभिजन कार्यक्रममा देखिएका थिए। यस कार्यक्रममा अंकिता लोखंडेका साथमा उनको जोडी चर्चित रह्यो। यस कार्यक्रममा मानवको भुमिकामा उनलाई धेरैले चिने।
फिल्म ‘कोइ पो चे’बाट सुशान्तले बलिउडमा डेब्यू गरे। त्यसपछि उनी लगातार फिल्ममा देखिए। यसपछि उनका ‘शुद्ध देसी रोमांन्स’, ‘पीके’, ‘एमएस धोनीः अनटोल्ड स्टोरी’, ‘राबता’, ‘वेलकम टू न्यूयोर्क’, ‘केदारनाथ’, ‘राबता’, ‘वेलकम टू न्यूयोर्क’, ‘केदारनाथ’, ‘सोन चिडिया’, ‘छिछोरे’, ‘ड्राइव’ जस्ता फिल्ममा देखिए।
भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको वायोपिक फिल्म एमएस धोनीः अनटोल्ड स्टोरी सुशांन्तको फिल्मी करिअरको पहिलो सुपरसिट फिल्म रह्यो। २०१६ मा आएको यो फिल्मले बक्स अफिसमा पनि निकै राम्रो कमाई गरेको थियो। धर्मा प्रोडेक्सनको फिल्म ‘ड्राइव’ मा उनी अन्तिम पटक देखिएका थिए। २०१९ मा आएको यस फिल्ममा उनी जैकलिन फर्नान्डेजसँग रोमान्टिक भुमिकामा देखिएका थिए। डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध यो फिल्म भने सफल हुन सकेन।
साढे ४ अर्ब सहयोग उठाउने क्याप्टेन टमको प्रमोसन, १०० औं जन्मदिनमा कर्णेलमा बढुवा
Breaking…सुशान्तको मोबाइलको फरेन्सिक रिपोर्ट सार्वजनिक, भेटियो यस्तो नसोचेको प्रमाण !
सुशान्तसिंहको अन्तिम दाहसंस्कारः बुवा र बहिनीहरुले दिए दागबत्ती